Mareykanka oo ka hadlay duqaynta cusub ee ka dhacday Galmudug | Dhacdo
Mareykanka oo ka hadlay duqaynta cusub ee ka dhacday Galmudug
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa duqayntii 2aad ka gaystay deegaan ka tirsan Gobolka Mudug, toddobaad gudihiis, duqayntan middii ka horeysay ayaana Talaadadii ka dhacday deegaanka Qaycad ee Gobolka Mudug.
Duqaynta 2aad ayaa Jimcihii ka dhacday inta u dhaxeyso deegaanada Qaycad iyo Hareeri-dheere, sida ay mar sii horeysayba xaqiijisay Wasaaradda Amniga Galmudug.
“Laba gantaal oo kuwa diyaaradaha laga soo rido ah ayaa lagu duqeeyay saldhig kale oo kooxda Al Shabaab ay ku lahaayeen Qaycad iyo Hareeri-dheere dhexdooda, waxaana hadda horey u galay Ciidamada Qaranka iyo kuwa Galmudug.” Ayaa lagu sheegay war ka soo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug.
Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in duqaymo ka dhan ah Al Shabaab ay Jimcihii shalay diyaaradahooda ka fuliyeen agagaarka deegaanka Qaycad.
Warkan oo lagu sheegay Warsaxaafadeed uu ku saxiixnaa Afhayeenka Pentagon-ka, Cindi King ayaan dhanka kale lagu faah faahin khasaaraha ka soo gaaray Shabaabka.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa dhankiisa sheegay Ciidamada Galmudug oo garabsanaya Ciidanka Xoogga Dalka iyo saaxiibada caalamiga ay wadaan hawlgalo lagu wiiqayo argagixisada.
Mareykanka ayaa u muuqdo mid dib u bilaabay duqaymaha ka dhanka ah Ururka Al Shabaab, oo hakad uu ku jiray lixda bilood ee xafiiska uu jooggo Madaxweyne Joe Biden.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa duqaymaha ugu badan ka gaystay Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya, xilligii Donald Trump.